Sunday November 29, 2015 - 01:32:30 in Xiriirka Kubadda Laliska by Nocsom Editor
Tababar heer Caalami ah oo kubada Lalisla oo ay ka qeyb qaadanayeen 18 macalin oo xirfada macalinimo la barayay ayaa lagu soo gebagebeeya Magaalada muqdisho waxaana xaflada xeritaanka kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay Guddiga Olombikada Soomaal
Tababar heer Caalami ah oo kubada Lalisla oo ay ka qeyb qaadanayeen 18 macalin oo xirfada macalinimo la barayay ayaa lagu soo gebagebeeya Magaalada muqdisho waxaana xaflada xeritaanka kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay Guddiga Olombikada Soomaaliyeeed, madaxda xiriirka kubadda La laliska, madaxda xririirada kale gediasan iyo Marti sharaf kale.
Tababarkan oo mudo 12 maalin socday waxaa soo qaban qaabiyay guddiga Olombikada Soomaaliyeed waxaana bixiyaynay laba Macalin oo u kala dhashay dalalka Mauritius iyo Ethiopia.
Ugu Horeyn waxaa xaflada ka hadlay Guddoomiyaha Xiriirka kubadda LaLiska Cabduqaadir Cumar Abuukar, waxuuna sheegay in ujeedka tababarka loo qabtay ay ka dambayso sidii xiriirka ku yeelan lahaa Macalimiin wax soo saar wanaagsan yeesha ,waxuuna macaliinta seminarka ka qayb galay uu kula dardaarmay in aqoonta la baray ay si wanaagsan u gubiyeen bahda kubadda la liska waxuuna mahad celin usoo jeediyay Guddiga Olombikad Soomaaliyeed oo suura geliyay tababarkan.
Sidoo Kale waxaa goobta ka hadlay Labada Macalin ee tababrka bixinayay Apaddo oo u dhashay Muritoius oo marki labaad tababar ka bixiyay Soomaliya iyo Alamayu oo Ethiopia u dhashay waxayna sheegeen in macalimiinta cusub ay aad uga faa’iidaysteen casharadii la siiyay iyo tababarki ay garoonka Wiish ku qaaten mudada 12 maalin ah waxayna mahad celi n usoo jeediyeen Guddiga Olombikda oo sura geliyay iyo dhamaan masuuliyiintii socodsiinta tabbarka ka caawisay.
Ugu dambayn waxaa xaflada soo xeray guddoomiyaha Gos, Cabdullaahi Axmed Tarabi waxuuna sheegay in tababarkan uu qayb ka yahay horumarinta xiriirada isboortiga gobolada dalka si ay macaliinta wax uga soo saaraan iskuudla degmooyin iyo gobolada ” in la helaa ciyartooy wanaagsan waxay ku xeran tahay in marka hore la tababaro macalimiin wanaagsan ayuu Gudoomiye Tarabi yiri.
Guddoomiye Tarabi ayaa macalimiinta u sheegay in ay saaran tahay masuuliyad qaran laga doonayo in ay kasoo dhalaalaan.
Macalinmiinta ka qayb gashay oo ka koobnaa 18 macalin oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kana yimid maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa la gudoonsiiyay shahaadooyinki ay tababarka uga qayb galeen.